…त्यसपछि छाडे शशांक र सुजाताले शेखरको साथ
Copyright © 2022 Kenjo Khabar
Devlopment by nW-Tech.
पाँचथरमा कार दुर्घटना हुँदा एकको मुत्य, एक घाइते
लागू औषध दुर्व्यसनीपनि यहिँ ग्रहका हुन्
इलाममा बुलेरो दुर्घटना हुँदा पाँचथरका २ र इलामका १ जनाको मृत्यु
लागुऔषध ब्राउनसुगरको कारोबारमा संलग्न इलामका १ सहित ५ जना पक्राउ
प्रदेश १ सरकारले गाडीमै ३ अर्ब ११ करोड खर्चिने
यस्ता छन् विश्वकप फुटबल हुने कतारका ८ रंगशाला (फोटोफिचर)
फकाएर घाँस काट्न जंगलमा लगेर श्रीमतीको हत्या
भारतको दार्जीलिङसँग जोडिएका नेपालका नाका सिल
१. आफ्नै कलाले जेलपरेका प्रतिभा *
२. फिदिममा दुषित पानीका कारण बढ्दै संक्रमण
३. प्रदेश १ को नाममा दुई शब्द नजोडिने, ‘किराँत’ आउट
४. जिल्ला भलिवल संघ पाँचथरमा २३ वर्ष पछि नेतृत्व परिर्वतन
५. पाँचथरमा गोलियाले किच्दा एकको मृत्यु
६. नातिनीलाई यौन धन्दामा लगाउने हजुर आमासहित दुई पक्राउ
७. चार महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको एसईई नतिजा यो वर्ष दुई महिनामै
८. इलाममा बुलेरो दुर्घटना हुँदा पाँचथरका २ र इलामका १ जनाको मृत्यु
९. भारतको दार्जीलिङसँग जोडिएका नेपालका नाका सिल
१०. गुनगुनाहट तमोरको (फोटो फिचर )
panchthar covid-19 local goverment phidim local government tourism blog
काठमाडौं ।नेपाली काँग्रेसमा सक्रिय राजनीति गरिरहेका कोइराला परिवारका तीन नेता तीनतिर उभिएका छन् । १४ औं महाधिवेशनले कोइराला परिवारका शेखर, शशांक र सुजातालाई तीन कित्तामा उभ्याएको हो ।
महाधिवेशनमा तीन नेताबीच ‘पावर सेरिङ’मा हुन नसकेपछि कोइराला परिवार विभाजित भएको खुलेको छ । करिब ६ वर्ष पार्टीको संस्थापन इतर पक्षमा रहेका तीनै जनाले सुरुमा सभापतिमा दाबी गरेका थिए । उनीहरुसहितको नेतृत्व गरेका रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता प्रकाशमान सिंहको पनि शसक्त दाबेदारी थियो ।
कोइराला परिवारका तीन नेताले भनिरहेका थिए – हामी (शशांक, शेखर र सुजाता) मध्ये एक । तर, अन्तिममा उनीहरु तीनैजना पौडेललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउन तयार भए का थिए । संस्थापन इतरमा पौडेलको नेतृत्वमा ल्याउन बाँकी प्रकाशन थिए । तर, पौडेल समूहका नेताहरुले टीमको खाका बनाउन थालिसकेका थिए ।उनीहरुले सभापतिमा पौडेल, उपसभापतिमा, शेखर र प्रकाशमा, महामन्त्रीमा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाललाई उठाउने प्रारम्भिक टीम बनाएका थिए । शशांक कोइरालाले पनि उपसभापतिमा दाबी गरे । एक नेताका अनुसार पौडेल सभापतिको उम्मेदवार भएको अवस्थामा त्यो सम्भव थिएन ।
प्रकाशमानले सभापतिमा दाबी नछोडेपछि पौडेल सभापतिको उम्मेदवार असम्भव भइदियो । प्रकाशमान लडे पनि शशांकले पौडेललाई सभापति उठाएर आफू उपसभापति बन्न चाहेका थिए । पौडेलले प्रकाशमानलाई मनाउन आफूले पनि शेखर कोइरालाले अड्डी बसे । संस्थापन इतरमा दुईजना उम्मेदवार हुँदा पौडेलभन्दा शेखर उपयुक्त हुने गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङहरुको मत आयो । अनि शेरबहादुर देउवासँग पूर्ण टीमसहित शेखर मैदानमा आउने अवस्था बन्यो । गुरुराज घिमिरेका अनुसार शेखरको टीममा सुजाताले उपसभापति उम्मेदवार हुने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, शेखर कोइरालाले सुजातालाई उपसभापति बार्गेनिङ नगरी परिवारका हिसाबले निसर्त सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
उनले ‘कोइराला परिवारबाट म सभापतिको उम्मेदवार छु, तपाईंहरु पदाधिकारीमा दाबीमा नगरिदिनुस् । केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुस् । नेतृत्व परिवर्तनका लागि यो अहिलेको आवश्यकता हो’ भनेका थिए ।
सुजाता उपसभापतिको उम्मेदवार हुने मनस्थितिबाट ब्याक हुन चाहिनन् । शेखर समूहबाट उपसभापतिको उम्मेदवार हुन नपाउने संकेत पाएपछि उनी प्रकाशमान सिंहकहाँ पुगेकी थिइन् ।
सुजाता प्रकाशमान सिंहको समूहमा पुगेपछि शेखर टीममा शशांकलाई साथमै लिएर जाने विषयमा केही नेताले जोड गरेका थिए । घिमिरेले भने, ‘शशांक दाइको भूमिकालाई जोगाउने कि भन्ने छलफल भएको थियो । शशांक दाइलाई उपसभापति राख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं ।’
उनका अनुसार शशांकलाई उपसभापतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पक्षमा बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, दिलबहादुर घर्ती, दिलेन्द्र बडू र जीवन परियार उभिएका थिए । शशांक आफैंले शेखरको टीममा पनि उपसभापतिको उम्मेदवार हुने रहर गरेका थिए । तर, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, मिनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी र गगन थापाले शशांकलाई उपसभापतिको उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरे ।
डा. मिनेन्द्र रिजाललाई महामन्त्रीको उम्मेदवारीबाट ब्याक गराएर शशांकलाई उपसभापति बनाउने तहको छलफल भएको थियो । तर, उपसभापतिको उम्मेदवार बनाएपनि शशांक कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने संकेत देखाएको शेखरको निष्कर्ष रह्यो ।
उनले भने, ‘सभापति र उपसभापतिका उम्मेदवार कोइराला परिवारबाट बने ब्याक फायर हुन्छ, हाम्रो र शशांकको काम गराइको स्पिरिट पनि मिल्दैन ।’ शेखरको यस्तो बचनपछि शशांकको मन भाँचियो । त्यसपछि उनी दाजु प्रकाश कोइरालासँग सुझाव लिन पुगे । प्रकाशको निवासमा शशांक र उनीबीच प्रश्न उत्तर चल्छ ।
प्रकाश : तिमी सभापति लड्दैनौं हैन ?
शशांक : म कसरी लड्नु ? शेखर दाइ लड्नेभएपछि..
प्रकाश : त्यसो भए शेरबहादुर देउवासँग तिम्रो सम्बन्ध कस्तो छ ?
शशांक : राम्रै छ ।
प्रकाश : सम्बन्ध नबिगार्नु ।
आफू सभापतिमा नलड्ने भए देउवाको विरुद्धमा नजान प्रकाशबाट सुझाव पाएका शशांकले महाधिवेशनमा त्यही गरे । त्यसका पछाडि शेखरले पछिल्लो समय शशांकको तेजबोध गरेको आरोप उनी निकट नेताहरुको छ ।
शेखर कोइरालाले १३ औं महाधिवेशनमा ‘शशांक कोइरालालाई महामन्त्री छाड्नु मेरो ठूलो भूल थियो’ भन्ने वाक्यले शशांकलाई बिझाइरहन्थ्यो ।
गिरिजा युगमा शेखर–सुजाता द्वन्द्व
प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनापछि काँग्रेसमा गिरिजाप्रसाद युग सुरु भएको थियो । जसमा छोरी सुजातालाई राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने गिरिजाप्रसाद लागि परे भने शेखरलाई राजनीतिक भूमिकामा स्थापित गर्ने नोना कोइरालाबाट भगिरथ प्रयास भयो । तर, गिरिजाप्रसाद युगमा वीपीका पुत्रहरुले भने अभिभावकत्व महसूस नगरेको उनी निकट नेताहरुको गुनासो छ ।
१२ औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा आएपछि मात्रै वीपी पुत्र शशांकलाई राहत भएको उनी निकट नेताहरुको बुझाइ छ । ०६६ सालमा गिरिजाप्रसादको निधनपछि नेतृत्वको विषयलाई लिएर कोइराला परिवारभित्र आ–आफ्नै दाबी र सक्रियता थियो । तर, कोइराला परिवारमा नेतृत्व स्थापितका लागि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नै थुप्रै प्रयोग भएका थिए । सबैभन्दा पहिले बीपीका ज्येष्ठ पुत्र प्रकाशलाई गिरिजाप्रसादपछि कोइराला वंशको उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भयो ।
६–७ माघ ०५७ मा पोखरामा भएको दसौँ महाधिवेशनबाट बीपी कोइरालाका जेठा छोरा प्रकाश अगाडि आएका थिए । १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई स्वीकारेर मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएपछि प्रकाशलाई काँग्रेसबाट निस्कासित गरियो । त्यसपछि बीपीको विरासत धान्ने प्रकाश कोइरालाको सम्भावना तुहियो । अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजर शेखरतिर सोझियो ।
केशव कोइरालाकी पत्नी नोनाले ११ औँ महाधिवेशनमा छोरा शेखरलाई अघि सार्दै आफूले सक्रिय राजीतिबाट विश्राम लिइन् । तर, शेखरलाई कोइराला परिवारको उत्ताराधिकारीका रुपमा अगाडि बढाउने गिरिजा र नोनाको योजनामा सुजाताले ब्रेक लगाइदिएको नेताहरु बताउँछन् । सुजाताको राजनीतिक चाहनामा गिरिजाप्रसादले नोनासँगको सहमति बन्धकी राखे । अनि गिरिजाप्रसादले जीवनको अन्त्यतिर शेखरलाई भन्दा आफ्नी छोरीको राजनीतिक उचाइलाई माथि उठाए । उनले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री मात्रै बनाएनन् पार्टीको विदेश विभागको जिम्मेवारी पनि दिए । कोइराला परिवारका शेखर र शशांक पछाडि छुटे ।
कोइराला परिवारबाटै नेतृत्व स्थापित गर्न गिरिजाप्रसादले योजनामा धक्का लाग्यो । दुई कार्यकाल मात्र सभापति बन्न पाउने पार्टी विधानमा संशोधन गराएर कार्यकालको बन्देज हटाए । आफूपछि नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलको सम्भावना देखिएका कारण पनि उनले १४ वर्ष सभापति पद अड्याएर राखे । तर पार्टीमा देउवा र पौडेलले कोइराला परिवारका तीन जनाले थेग्न नसक्ने गरी राजनीतिक शक्ति बढाएपछि गिरिजाप्रसादले पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाको वंशजभन्दा बाहिरका सुशील कोइराला अगाडि सारेका थिए ।
आफ्नी आमा दिव्याकुमारीकी साहिँली बहिनी कुमुदिनीदेवीका छोरा सुशीललाई उनले उत्तरार्धमा कार्यवाहक सभापति बनाए । १२ औं महाधिवेशनमा देउवालाई पराजित गरी काँग्रेसको नेतृत्व कोइराला थर भन्दा बाहिर जान दिएनन् ।
सुशील कोइरालाको निधनपछि भएको १३ औं महाधिवेशनबाट तत्कालीन संस्थापन पक्षको आपसी बैमनस्यको लाभ देउवाले उठाए । शशांक कोइरालाको सद्भाव र कृष्णप्रसाद सिटौलाको साथमा देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा विरासत फर्काउने शेखर कोइरालाको प्रयास पनि असफल भयो । देउवा पुनः काँग्रेस सभापतिमा विजयी भएका छन् ।
कोइराला निकट नेता गुरुराज घिमिरेका अनुसार १४ औं महाधिवेशन कोइराला परिवारका लागि विरासत फर्काउने ऐतिहासिक मौका थियो । ‘मत परिणामले पनि त्यो देखायो । कोइराला परिवारका बीचमा समझदारी भइदिएको भए अरु नेताहरुलाई सँगै उभिन दबाब हुन्थ्यो । उहाँहरुको असमझदारीले त्यो कुरा गुम्यो,’ उनको भनाइ छ ।
तर काँग्रेसमा कोइरालाको विरासत अब करिब शेखर कोइरालाको काँधमा पुगेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट कोइराला परिवार नेतृत्वमा नपुगे पनि कोइराला परिवारको शक्ति भने शेखरको हातमा पुगेको छ ।
काँग्रेसमा शेखर वैकल्पिक नेताका रुपमा उदाएका छन् । तर, काँग्रेसको इतिहासमा कोइराला परिवारबाट सभापतिको उम्मेदवार भएर हार्ने शेखर पहिलो व्यक्ति हुन् । कोइराला परिवारबाट सभापतिमा उम्मेदवार बनेका बिपी, मातृका, गिरिजाप्रसाद र सुशीलले भने पराजित हुन परेको थिएन । २००६ सालमा बनेको नेपाली काँग्रेसमा पाँच दशक बढी समय कोइराला परिवारको नेतृत्व गरेको थियो । अहिलेसम्म काँग्रेसमा कोइराला थर बाहिरबाट सुवर्ण शम्शेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाले मात्र नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।
अब फेरि मिल्न सक्छन् तीन कोइराला ?
महाधिवेशनबाट छुट्टिएका तीन कोइरालाको मिलन होला कि नहोला भन्नेमा काँग्रेसजनमा चासो छ । देउवासँग नजिक भएका शशांक, प्रकाशमान सिंह कहाँ पुगेकी सुजाता र वैकल्पिक नेताका रुपमा उदाएका शेखरबीच सहकार्य सम्भव छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । साउन २१ गते काठमाडौंमा भएको शेखर गुटको भेलामा शशांक र सुजाता देखिएनन् । शशांकको सचिवालयका अनुसार शेखरले नबोलाएपछि उनीहरु भेलामा अनुपस्थित भएका थिए ।
तर, तीन कोइराला तीनतिर हुँदा कसैलाई फाइदा भएको छैन । फाइदा भएको छ त कोइराला परिवार विरुद्ध उभिएका देउवालाई । गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘कोइराला परिवारका नेताहरुमा यो कुराको आत्माबोध भयो भने उहाँहरु एक ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ ।’
धरातलीय यर्थाथ र वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर परिवारभित्रको राम्रो गर्न सक्ने एउटा मान्छेलाई अरुले साथ दिनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘बीपी कोइराला हुञ्जेल गिरिजाबाबुले टिकट पाउनुभएन । गिरिजाबाबुले बल गरेपछि ‘बीपीले तँ राजनीति गर्, म तेरो प्रचारमा हिँड्छु’ भनिदिनुभयो । तर, उहाँले बीपीलाई साथ दिनुभएको थियो ,’ उनी भन्छन् ।
राजनीतिमा एउटा व्यक्तिको सम्भावना प्रवल हुँदै गयो भने अरुले मद्दत गर्नुपर्ने घिमिरेले बताउँछन् । ‘पहिलो अवसर शशांक दाइलाई थियो । उहाँले गतिविधि धेरै अगाडि बढाउनु भएन । रोग लागेपछि सुजाता दिदीको सम्भावनामा ब्रेक लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि शेखर दाइले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको थियो । सबैको चाहना थियो, शेखर दाइलाई सबैले मद्दत गर्नुपथ्र्यो ।’
संस्थापन इतरका सबै युवाहरु शेखरलाई मद्दत गर्न तयार हुँदा पनि परिवारकै शशांक र सुजाताले साथ नदिँदा परिणाम प्रतिकुल आएको घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार शशांक र सुजाताका लागि शेखर कोइरालाको समूहमा जहिल्यै ढोका खुला छ । ‘भोलिको राजनीतिमा शशांक र सुजाताको सम्भावना छ । परिवारमा तालमेल भयो भने भोलि शेखर दाइले नै शशांक या सुजातालाई अगाडि सार्न सक्नु होला । यसमा कोइराला परिवारको कुरा जोडिएको छ,’ घिमिरे भन्छन् ।
यता शेखर कोइरालाका महाधिवेशन क्याम्पेनर पुरञ्जन आचार्यले भने कोइराला परिवार स्वतन्त्र रुपमा तीनवटा इकाइजस्तो भएको बताए ।
‘फाइदा घाटा जे हुन्छ, पहिलो पकट कोइराला परिवार तीन टुक्रामा विभाजित भयो । यो हुनै सक्दैन भन्ने थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका आचार्यले भने, ‘तर भयो । अब सामाजिक र पारिवारिक रुपले यिनीहरूको भेटघाट होला । तर, राजनीतिक रुपले एकै ठाउँमा बस्ने मैले सम्भावना देख्दिनँ ।’
शशांक र सुजाताबाट यसपटक कोइराला परिवारको चलन छोडिएको आचार्यले बताए । ‘शेखर कोइराला सिनियर थिए । उनको पछाडि लाग्नुपर्ने थियो । जुन चलन हामीले देखिरहेका थियौं, त्यो यसपालि देखिएन । भविष्यमा पनि उनीहरुको एकता हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।
यद्यपि शेखर कोइरालामा सुजाता र शशांकसँग भेटेर फेरि मिलेर जाउँ भन्नेखालको मानसिकता रहेको आचार्यको दाबी छ । ‘त्यसका लागि उनीहरुका प्राथमिकता राजनीतिकरुपमा अगाडि आउनुपर्छ । तर, अहिले कोइराला परिवारका तीनैजना एक ठाउँमा आउन विभिन्न कारणले लाज पनि छ,’ उनले भने, ‘पहिले पारिवारिक भेटघाट होला । सामाजिकरुपले एक ठाउँमा आउनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र राजनीतिक रुपमा एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्छ कि ?’
केन्द्रीय कार्यसमितिमा भने तीन कोइरालाको भेट भइसकेको छ । पुस १९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो बैठकमा तीन कोइराला सहभागी थिए । केन्द्रीय समितिमा भने तीनै जानको भेट हुन्छ । ३५ खुला सदस्यमा सर्वाधिक मत ल्याएर शशांक केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका छन् भने उपसभापतिमा पराजित सुजातालाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । सभापतिमा दोस्रो मत पाएका शेखर स्वतः केन्द्रीय सदस्य छन् ।
बिपी र मातृकाको लडाइ
काँग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै कोइराला परिवारभित्र राजनीतिक टकराव सुरु भएको देखिन्छ । बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच व्यक्तित्वको टकरावबाट राजनीतिक फाटो देखिएको थियो ।
पाँचौं महाधिवेशन २००९ जेठ १३ मा जनकपुरमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइराला दुई भाइबीच सभापतिका लागि विवाद भएको थियो ।
बीपीलाई सभापति बनाउने भद्र सहमति मातृकाले तोड्न खोजेपछि गणेशमान सिंह, गोपालप्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित पनि सभापतिको दौडमा निस्किएका थिए ।
मातृकाले सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिए आफूहरू पनि सभापतिको उम्मेदवार नबन्ने सिंह र भट्टराई अडान थियो । त्यसपछि मातृकाबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा भयो । बीपी र केदारमानबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भयो । तर, पार्टीमा बिपी र मातृकाबीच सम्झौता भए पनि राज्य सत्ताका विषयमा चर्को विवाद देखियो ।
२००७ मा राणा शासनको पतनपछि काँग्रेस र राणाहरूको संयुक्त सरकारमा श्री ३ मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र बीपी कोइराला गृहमन्त्री बने । केही समयपछि मोहनशमशेर र बीपीको खटपटले उक्त सरकार ढल्यो । यसपछि राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए । तर, मोहनशमशेरको बहिर्गमनपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । पार्टीको नीति विपरीत मातृकाको सरकार अगाडि बढेको भन्दै बीपीले विरोध गर्न थाले । उक्त विवाद चर्किँदै जाँदा बीपीले मातृकालाई नेपाली काँग्रेसबाट निष्कासन गरिदिएका थिए ।
बीपीका उम्मेदवार विरुद्ध गिरिजा
नेपाली काँग्रेसको छैठौं महाधिवेशनमा बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला फरक फरक कित्तामा उभिए ।
२०१२ माघ ९–१३ गतेसम्म वीरगञ्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनमा सुवर्ण शम्शेर र गणेशमान सिंहबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भयो । बीपीलगायत शीर्षनेताहरू सुवर्णको पक्षमा लागे भने गणेशमानलाई गिरिजाप्रसादले खुलेरै साथ दिए । बीपीको साथ पाएका सुवर्णशम्शेर सभापतिमा विजयी भए भने गणेशमान पराजित भए ।
शेखर विरुद्ध शशांक–सुजाता
काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले विगतको बीपी, मातृका र गिरिजाबीचको विवादलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । शेखर कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदा (भाइ–बहिनी) शशांक र सुजाताबाट ‘धोका’ पाए । शेरबहादुर देउवाबाट काँग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारमा फर्काउने शेखरको प्रयासमा शशांक र सुजाताको साथ रहेन ।
शेखरको साथ छोडेर सुजाता प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा पुगिने भने शशांकको सद्भाव देउवापतिर ढल्कियो । महाधिवेशन अवधिभर शेखरको साथमा उभिन तयार नभएका शशांकले देउवालाई भेट्न भने प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुग्ने कष्ट गरे ।
औपचारिक रुपमा शेखरको साथ नछोडेका शशांकले सांकेतिक रुपमा देउवाको साथमा रहेको महाधिवेशनमा सन्देश प्रवाह गरेका थिए । देउवासँग सभापतिमा पराजित शेखरले भाइ बहिनी मिलाउन नसक्नुलाई कमजोरीका रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।
याे खबर राताेपाटीमा लोकेन्द्र भट्टले लेखेका हुन् ।
आफ्नै कलाले जेलपरेका प्रतिभा *
फिदिममा दुषित पानीका कारण बढ्दै संक्रमण
प्रदेश १ को नाममा दुई शब्द नजोडिने, ‘किराँत’ आउट
जिल्ला भलिवल संघ पाँचथरमा २३ वर्ष पछि नेतृत्व परिर्वतन
पाँचथरमा गोलियाले किच्दा एकको मृत्यु
तिम्बु पाेखरी मिडिया एण्ड इभेन्टबाट सञ्चालीत
सामाजीक सञ्जालमा हामी
केन्जाे खबर डटकम
Copyright ©2022 Kenjo Khabar | All rights Reserved.
Website By : nWTech.